MB 2015 Oktobra - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Na dia niteraka fahasambarana vetivety aza io fomba fanao tsy mitombina io, dia tsy nitondra fifaliana maharitra. Azafady, aza diso hevitra; Mahafinaritra ahy ny mihomehy toy ny olon-drehetra. Izany no antony ankasitrahako ny tenin’i Karl Barth hoe: «Miomehy; no zavatra akaiky indrindra amin’ny fahasoavan’Andriamanitra. “Na dia samy afaka mampiomehy antsika aza ny fahasambarana sy ny fifaliana, dia misy fahasamihafana lehibe eo amin’izy roa. Fahasamihafana niainako taona maro lasa izay rehefa maty ny raiko (eto ankavanana no misy sary miaraka). Mazava ho azy fa tsy faly tamin’ny fahafatesan’i Dada aho, kanefa nahazo toky sy nampahery ahy ny fifaliana nahafantatra fa hiaina fifandraisana vaovao amin’Andriamanitra mandrakizay izy. Nitohy sy nampifaly ahy ny eritreritra momba io zava-misy be voninahitra io. Miankina amin’ny fandikan-teny, ny Baiboly dia mampiasa ny teny hoe sambatra sy sambatra eo amin’ny in-30 eo ho eo, fa im-300 mahery kosa ny fifaliana sy ny fifaliana. Ao amin’ny Testamenta Taloha, ny teny hebreo hoe sama (nadika hoe mifaly, mifaly ary finaritra) dia ampiasaina mba hilazana zavatra maro isan-karazany, toy ny firaisana ara-nofo, ny fanambadiana, ny fiterahana, ny fijinjana, ny fandresena ary ny fisotroana divay (Tonon-kira. 1,4 ; Ohabolana 05,18; Salamo 113,9; Isaia 9,3 ary Salamo 104,15). Ao amin’ny Testamenta Vaovao, ny teny grika hoe “chara” dia ampiasaina voalohany indrindra hanehoana fifaliana amin’ny asa fanavotana nataon’Andriamanitra, dia ny fiavian’ny Zanany (Lio. 2,10ary ny fitsanganan’i Jesosy tamin’ny maty (Lioka 24,41). Rehefa mamaky izany ao amin’ny Testamenta Vaovao isika dia takatsika fa ny teny hoe fifaliana dia mihoatra noho ny fahatsapana; toetra mampiavaka ny kristiana izany. Ny fifaliana dia anisan’ny voa vokarin’ny asan’ny Fanahy Masina ao anatin’izany.
Fantatsika tsara ny fifaliana hitantsika amin’ny asa soa ao amin’ny fanoharana momba ny ondry adala sy ny farantsakely very ary ny zanaka adala.5,2-24) jereo. Amin’ny alalan’ny famerenana amin’ny laoniny sy ny fampihavanana izay “very” no ahafantarantsika eto fa fifaliana no tena hita ao amin’Andriamanitra Ray. Mampianatra ihany koa ny soratra masina fa ny tena fifaliana dia tsy voataonan’ny toe-javatra ivelany toy ny fanaintainana, ny fanaintainana, ary ny fahaverezana. Mety ho vokatry ny fijaliana noho ny amin’i Kristy ny fifaliana (Kolosiana 1,24) be. Na dia teo aza ny fijaliana sy ny henatra nahatsiravina noho ny fanomboana, dia niaina fifaliana lehibe i Jesosy2,2).
Noho ny fahafantarana ny zava-misy iainan’ny mandrakizay, dia maro tamintsika no nahatsapa tena fifaliana na dia tsy maintsy nanao veloma ny olon-tiana aza. Marina izany satria misy fifandraisana tsy mety vaky ny fitiavana sy ny fifaliana. Hitantsika izany amin’ny tenin’i Jesosy rehefa namintina ny fampianarany ho an’ny mpianany izy hoe: “Izany rehetra izany dia lazaiko aminareo, mba ho feno ny fifaliako hianareo, ka ho tanteraka ny fifalianareo. Ary izao no didiko: Mifankatiava ianareo tahaka ny nitiavako anareo. (Jaona 15,11-12). Tahaka ny fitomboantsika ao amin’ny fitiavan’Andriamanitra dia mitombo koa ny hafaliantsika. Eny tokoa, rehefa mitombo amin’ny fitiavana isika dia mitombo ao anatintsika avokoa ny vokatry ny Fanahy Masina.
Ao amin’ny taratasiny ho an’ny fiangonana tany Filipy, izay nosoratan’i Paoly nandritra ny fotoana nigadrany tany Roma, dia manampy antsika hahatakatra ny maha samy hafa ny fifaliana sy ny fifaliana izy. Tao amin’io taratasy io izy dia nampiasa ny teny hoe fifaliana, fifaliana ary fifaliana in-16. Efa nitsidika fonja sy fonja maro aho ary matetika tsy hahita olona falifaly any ianao. Fa i Paoly, izay voafatotra tao am-ponja, dia nahatsapa fifaliana tsy fantany na ho velona na ho faty. Noho ny finoany an’i Kristy, i Paoly dia vonona ny hijery ny toe-javatra nisy azy tamin’ny alalan’ny mason’ny finoana tamin’ny hazavana hafakely izay tsy hitan’ny ankamaroan’ny olona. Mariho izay lazainy ao amin’ny Filipiana 1,12-14 nanoratra hoe:
Ireo teny mafonja ireo dia avy amin’ny fifaliana anaty tsapan’i Paoly na dia teo aza ny toe-javatra nisy azy. Fantany hoe iza izy ao amin’i Kristy ary iza i Kristy ao aminy. Ao amin’ny Filipiana 4,11-13 nanoratra izy hoe:
Satria Andriamanitra no namorona antsika mba hifandray Aminy, dia tsy misy zavatra hafa afaka manome fahafaham-po ny fanahintsika sy mitondra fifaliana maharitra ho antsika. Amin’ny finoana no iveloman’i Jesosy ao anatintsika ary isika ao aminy. Satria tsy miaina ho an’ny tenantsika intsony isika, dia afaka mifaly amin’ny toe-javatra rehetra, na dia ao anatin’ny fahoriana aza (Jakoba 1,2), miray amin’i Jesoa izay nijaly ho antsika. Na dia teo aza ny fijaliany mafy tany am-ponja, dia nanoratra tao amin’ny Filipiana i Paoly 4,4: "Mifalia fa an'i Jesoa Kristy ianareo. Ary izao indray no tiako holazaina: Mifalia!"
Niantso antsika ho amin’ny fiainana feno fanoloran-tena ho an’ny hafa i Jesosy. Eto amin’ity fiainana ity dia misy teny toa tsy mitombina manao hoe: “Na iza na iza ta-hamonjy ny ainy na amin’inona na amin’inona, dia hahavery izany; (Matio 16,25). Amin’ny maha-olombelona antsika, dia matetika isika no tsy mihevitra ny voninahitra sy ny fitiavan’Andriamanitra ary ny fahamasinany mandritra ny ora maro na andro. Matoky anefa aho fa rehefa mahita an’i Kristy ao amin’ny voninahiny rehetra isika, dia hihazona ny lohantsika ka hanao hoe: “Ahoana no ahafahako mibanjina ny zavatra hafa?
Tsy mbola mahita an’i Kristy mazava araka izay irintsika isika. Mipetraka any amin'ny faritra tsy misy mponina izahay, raha lazaina, ary sarotra ny maka sary an-tsaina ireo toerana mbola tsy nandalovanay. Sahirana loatra isika amin’ny fiezahana ho tafavoaka velona amin’ny tanàna tsy miangatra mba hidirana ao amin’ny voninahitr’Andriamanitra (jereo koa ny lahatsoratra hoe “Ny Fifalian’ny Famonjena”). Ny fifalian’ny mandrakizay no mahatonga ny fahatakarana ny fijalian’ity fiainana ity ho fahafahana handray ny fahasoavana, hahalalana an’Andriamanitra ary hatoky Azy bebe kokoa. Mianatra mankasitraka bebe kokoa ny fifalian’ny mandrakizay isika rehefa avy niady tamin’ny famatoran’ny fahotana sy ny fahasarotana rehetra teto amin’ity fiainana ity. Hankasitraka bebe kokoa ny vatana be voninahitra isika rehefa avy niaina ny fanaintainan’ny vatantsika. Heveriko fa izany koa no antony nilazan'i Karl Barth hoe: "Ny fifaliana no endrika tsotra indrindra amin'ny fankasitrahana." Afaka ny ho feno fankasitrahana isika fa niorina teo anatrehan’i Jesosy ny fifaliana. Izany no nahafahany niaritra ny hazo fijaliana. Toy izany koa, dia napetraka teo anoloantsika koa ny fifaliana.